Muraayadaha barafka 2020 | U cusbooneysii maaskaarkaaga xilliga barafka - ULLER
Maalmaha barafka ayaa noo heesaya! Shaki la'aan, aad ayaan u faraxsanahay markaan aragnay in baraf aad u badan uu ku daatay meelaha barafka lagu ciyaaro. Shaki kuma jiro: fuula iyo fardooleyda ayaa ah kuwa inta badan inta badan xilliga barafka,samir la'aan buundada xigta inay timaaddo ama fasax usbuuc dhammaad ah si ay ulalaalaabto asxaabtaada safarka ah ama gudaha tiradda, samaynta boodbooyinkii ugu xumaa iyo tabaha.
Kuwa jecel isboortiga barafka iyo barafka iyo snowboard Waxay had iyo jeer doorbidaan baraf imika dhacay, runtuna waa in la qadariyo in xitaa maalmaha xagaaga aan ku aragno baraf yar saldhigyada ugu dhow. Taasina waa sababta ay diyaar ugu ahaanshaha ficilku ay muhiim u tahay! Adiguna ... Ma haysataa dhammaan qalabkaaga barafka lagu diyaariyo, oo ay ku jiraan kuwaaga muraayadaha barafka 2020 xilligan barafka?
Mid ka mid ah qalabka isboortiga ee ugu muhiimsan ee ay tahay inaad marwalba sidato markaad booqato meelaha barafka leh ayaa ah kalsoonidaada muraayadaha barafka. Dhib malahan hadaad jeceshahay snowboard ama barafka, aad muraayadaha barafka 2020 Kama maqnaan karaan kooxdaada isboorti.
Suura gal ma ahan in lagu dhaqmo isboortiga barafka iyadoo aan la taaban "sixir" taas muraayadaha barafka waxay siiyaan fuula Waxaana jira sababo aad u tiro badan oo ah sababta aan markasta u qaadan karno kuwayaga muraayadaha barafka! Iyadoo aan loo eegin xilliga aad aadeyso, xilliga iyo nooca barafka dhaca ... muraayadaha barafka 2020 iyagu waa a waa in!
Miyaad horeyba u ogayd sababaha ay tahay inaad had iyo jeer xirto muraayaddaada ama maaskaro marka aad aadeyso meelaha barafka? Shaki la'aan waa waqtigii la cusboonaysiin lahaa kanaga waji baraf oo tan u diyaar garow xilli ee baraf Sii wad akhriska oo soo ogow faa'iidooyinka ay leedahay labbiska ugu fiican muraayadaha barafka!
NAFTAADA KU DHEH SI FIICAN!
Maxay tahay sababta aan u xirto muraayadaha indhaha barafka?
Isboortiga barafka waa wax cajiib ah. Waxaan hubaa inaan aad iyo aad ula yaaban nahay sida dadka hibada leh u noqon karaan. fuula maalmahan, iyo sidoo kale jiilalka cusub ee fardooleyda kuwaas oo wax walba u bixiya wax quudhsasho. Laakiin mid ka mid ah cilladaha uu leeyahay barafka ayaa ah inay waxyeello weyn u geysan karto caafimaadka indhaheenna haddii aynaan taxaddar sax ah sameynin.
Labada xirfadle iyo kuwa bilowga ah iyo booqdayaasha dalxiis ee dalxiisyada waa inay ku ilaashadaan aragooda muraayadaha barafka iyo muraayadaha indhaha. Saamaynta uu barafka ku yeesho indhaha iyo aragga waxay u dhici kartaa si dhakhso leh oo ku dhowaad iyada oo aan la ogaan, sidaa darteedna waxaa had iyo jeer lagu talinayaa in la xidho ka hortagga indhaha marka meelaha barafka leh oo ay ku jiraan waxa loogu yeero "indho la'aanta barafka".
Waa maxay indho la’aan baraf?
Indho la’aanta barafka ”waa mid ka mid ah dhaawacyada indhaha ee ugu badan ee aad kala kulmi karto soo-gaadhista shucaaca qoraxda ee meelaha barafka. Magaca cilmiyaysan ee xaaladani waa qorraxda keratitis, in kasta oo sidoo kale loo yaqaan "photokeratitis", waxayna ka kooban tahay barar ku dhaca aagga isha ugu daahsan ee isha oo loo yaqaan 'cornea'.
Waa inaan markasta sidnaa muraayadaha barafka sharciyeysan si looga fogaado astaamaha indho la'aanta barafka, oo dhici karta 6 illaa 12 saacadood ka dib soo-gaadhista iftiinka xad-dhaafka ah iyo shucaaca awgood, badiyaaana labada indhoodba dhaawaca ayaa saameeya. Calaamadaha caamka ah waxaa ka mid ah aragga oo yaraada, u nuglaanta iftiinka, indhaha guduudan, dareen kacsan, jeexitaan, iyo xanuun daran.
Miyaan indhaha ka daawadaa barafka?
Waa inaan ka taxadaraa indhaheena saameynta milicsiga ee barafka. Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo sida barafka waxyeellada ugu yeelan karo aragtidayada iyo indho-beelka indhaha oo ah taxaddar, iyo sidoo kale in la fahmo muhiimadda had iyo jeer la xirto muraayadaha barafkainaynu indhaheenna ka taxaddarno.
Ski xilliyada fasaxa u dhexeeya fuula iyo asxaabteena, waa daqiiqado lama iloobaan ah oo ay tahay inaan seegin hadii aan fursad u helno inaan ku raaxeysano, laakiin waxaa muhiim ah in la fahmo in howlaha halista iyo tacabirka ay tahay in si dhab ah loo qaato oo aan qaadno dhammaan talaabooyinka ka hortagga ee aan ku waji baraf.
Maxay meelaha barafku waxyeelo ugu yeelan karaan aragtideena?
Meelaha barafka leh gaar ahaan waxay ugu xun yihiin indhaha sababahan 2 ee ugu waaweyn:
Ma ogtahay in barafku ka tarjumayo ilaa 80% shucaaca ultraviolet Tani waxay ka dhigan tahay inay afar laab ka muuqato biyaha, taas oo waliba sabab u ah daryeelka aragtideena.
Ma ogtahay in joogga meelaha barafku inbadan inaga saameeyo Saameynta waxyeelada leh ee qorraxda waxay ku kordheysaa meelaha barafka leh maadaama saamiga shucaaca ultraviolet uu kordhayo 10% 1000m kasta oo joog sare ah, taasoo saameyn ku yeelata yareynta miiraha cimilada.
Shucaaca cadceedda maalin walba wuu ina daboolayaa, oo ay ku jiraan maalmaha ugu kululaynta badan, meelaha barafka lehna ma jiraan. Meelahaasi, runtii, waa mid ka mid ah dusha sare ee dhulka ee daryeelka ugu weyn iyo ka hortagga ay tahay in la siiyo daryeelka ugu weyn. Astaamahiisa iyo xaaladihiisu waxay sare u qaadayaan heerka xaaladaha ka dhasha shucaaca qoraxda ee barafka. Waa inaan markasta xirnaa wanaag muraayadaha barafka 2020 ilaaliyayaashu inay si fiican u daryeelaan araga indhaha una dammaanad qaadaan aragtida ugu fiican ee deegaanka ficil ahaan, kana fogaano inaynaan nafteena u geysan nooc kasta oo dhaawac halis ah.
Waxa intaa dheer waxa loo yaqaan 'keratitis qoraxda', waxaa muhiim ah in marwalba la xidho muraayadaha barafka si aad nooga ilaaliso xaaladaha kale sida dhaawacyada isha, xad-dhaafka culeyska indhaha iyo xiisad muuqaal ah. Waxaan oo dhan waxaan uga fogaanaa wanaag muraayadaha barafka, tayo iyo xaqiijin leh oo ilaaliya aragtideena isla markaana naga caawiya inaan maalin walba ka sii fiicnaano fuula.
Maxay yihiin muraayadaha indhaha barafka ugu wanaagsan 2020?
Muraayadaha ugu fiican ee barafka waa muraayadaha tayada leh oo ku haboona baahiyaheena ah kuwa barafka wata ama kuwa barafka bara, waxayna inaga ilaalinayaan qorraxda iyo cunsuriyada sida ay tahay.
Ugu fiican Muraayadaha barafka
Waa inay isku mid noqdaan oo ay u hoggaansamaan heerarka ISO, iyagoo soo bandhigaya shahaadadooda CE oo dammaanad ka heysa Midowga Yurub.
Waa in muraayadaha barafka 2020 loo kala qaybiyey si ay nooga caawiso inaan iska ilaalino milicsiga dhibta leh.
Waa inay lahaadaan muraayadaha indhaha ee la isku beddeli karo si ay u doortaan qaybta ugu fiican ee dhalooyinka sida ku xusan munaasabadda.
Waxay damaanad qaadayaan ka ilaalinta qorraxda ugu yaraan 90%; intaas ka yar ayaa noqon doonta wax yar.
Waa inay lahaadaan ilaalinta UV-400, taas oo ah, kahortaga qorraxda UVA iyo falaadhaha UVB.
Waa inay ka samaysan yihiin polycarbonates-ka la shuban karo, sida polyurethane-ka thermoplastic-ka, si dabacsanaan fiican iyo xajin loo helo.
Waa inay ahaadaan muraayadaha barafka adkaysi, iftiin, raaxo leh iyo wixii ka sarreeya oo dhan oo la hagaajin karo si ay si sax ah u gutaan shaqadooda.
Ser Muraayadaha indhaha leh suunka hagaajinta ka-hortagga warqadda.
Waa inay ahaadaan muraayadaha barafka Nidaamka hawo-is-uruursiga gudaha, si dib-u-wareegga hawadu u noqdo mid horumarsan oo dammaanad qaadaya muuqaalkaaga.
Waxay ku dhex leeyihiin qeexitaankooda laba lakab oo ah nidaamka ceeryaanta ka hortagga (antifog) si aysan u qiirsan markay isticmaalayaan.
Muraayadaha SNOW 2020: Isbeddellada
Isbeddellada ee muraayadaha barafka 2020 waxay ku saleysan yihiin 4 dhinac: midab, cabir, firfircoonaan iyo qaab dhismeed. Sannadkan isbeddelku waa inuu xirto midabyo dhalaalaya oo marka lagu daro ilaaliyeyaashu ay kaa dhigayaan muuqaal aan caadi ahayn. Isbeddellada ee muraayadaha barafka2020 / 2021Waxay yihiin:
Muraayadaha indhaha ee barafka midab leh
Muraayadaha barafka oo leh qaab aan muuqan karin
Muraayadaha barafka ee jir
Muraayadaha indhaha ee barafka
Si kastaba ha noqotee, isbeddelka ugu weyn ee sanadkan ayaa ah tiknoolajiyadda ka dambeysa muraayadaha barafka 2020: Tech-Performance High Optics X-POLAR waa isbeddelkii ugu dambeeyay ee 2020/2021.
Inaad ka fikirto inaad iibsato muraayadaha indhaha barafka cusub waxay kicin karaan neerfaha qaarkood, laakiin haddii aad si cad uga muuqato talooyinka lagama maarmaanka u ah inaad raacdo si aad ula kulanto ujeedooyinkaaga ficil ahaan, markaa wax walbaa way kuu fududaan doonaan.
Maal gasho tikniyoolajiyadda.
Muuji qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada.
Raadi waxyaabaha ugu fiican.
Xullo muraayadaha barafka shahaado leh UV400 qorraxda ilaalinteeda.
Xullo Muraayadaha indhaha isku dhejisan oo leh muraayadaha indhaha laysku weydaarsado: ceeryaanta, roobka, duufaannada iyo xilliga barafka 2020.
Haddii aad ka fekereyso astaamahan markaad iibsaneyso qalabka isboortiga indhaha, ma jiri doonto wado lagu qaldo, laakiin inaad doorato kuwa ugu fiican muraayadaha barafka 2020.
Ha ahaato xagaaga, ha ahaato jiilaalka ... wadayaasha waxa ay u arkaan barafka waxaa hubaal ah inay noqon doonaan kuwa barafka wata iyo kuwa barafka xambaara oo diyaar u ah inay qasaan tan xilliga barafka. Khabiirka ugu badanna, si fiican u ogow: nabadgelyada ayaa ka horreysa! Marka ha ka waaban oo markasta wanaaggaaga qaado muraayadaha barafka 2020 Waxaan kugu arki doonaa tacaburka!